(4) Portrait- Part (4) ဓါတ်ပုံပညာ ဆိုင်ရာ မှတ်စု (၄)
Outdoor Portrait ရိုက် ကူးရေး အတွက် ပြင်ဆင်ရန်များ
Man made objects, such as power lines, signs etc
Natural light reflectors such as white buildings etc
Repeating lines to ‘frame’ the photo.
Objects that you can use during the shoot such as benches, fallen tress etc
အခြေခံ အားဖြင့် နေသာသည့်နေ့ တစ်နေ့ တွင် Sub ject ကို နေရောင် အောက် တွင် ထားကာ Aperture-f-16 ထား၍ ၄င်း နှင့် လိုက်လျှော ညီထွေ ဖြစ် သည် Shutter speed နှင့် ISO တို့ ကို setting လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူသိအများဆုံ နှင့် အထိရောက်ဆုံးသော Composition ဖြစ်သည်။ ပုံ တစ်ပုံကို အလျှားလိုက် နှင့် ထောင်လိုက် မျဉ်း နှစ်ကြောင်းစီ ဖြင့် အညီ အမျှ ပိုင်း လိုက်၍ ပေါ်လာသည့် ဖြတ်သန်း ဆုံမှတ် (၄) နေရာ မှာ COI - Center of Interest Points ဖြစ်သည်။ ထို ဆုံ ရပ်နေရာ များပေါ်တွင် Subject ကို ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤ နည်း သည့် အရိုးရှင်းဆုံး နှင့် အထိရောက်ဆုံး နည်း ဖြစ်သည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ Rule of Thirds ကို ချိုးဖေါက် သည်များလည်းရှိသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် Subject သည် ပုံ ၏ အလယ်တွင် ရှိနေ စေ ကာမူ ပုံ၏ Coposition ကို အားဖြည့်ပေးသည့် အနေအထားမျိုး ရှိသည့် ပုံ မျိုးတွင် Rule of Thirds ကိုချိုးဖေါက် ကာ သည်အတိုင်း ထားသည်လည်း ရှိသည်။
ပထမ ဦးစွာ ကင်မရာကို ‘Continuous shooting’ mode တွင်ထားပါ။ ဤသို့ဖြင့် တစ်ပုံ စီ လီ ၍ ရိုက်ရ သောကြောင့် ကုန်သည့် အချိန် သက်သာ သည်။ ထို့ ကြောင့် large format memory card ထည့်ထားရန် လိုသည်။
Source - DPhotoJournal);
portrait ရိုက်ရာတွင် Focusing on the eyes သည် Subject ၏ Emotion ကိုဖေါ် ဆောင်ပေးသဖြင့် ပုံ ကို ပို၍ အားဖြည့်ရာ ရောက်သည်။ Subject တွင် passion and expression ရှိ နေခြင်းဖြင့် ပုံစံ အမျိုးမျိုးသော Moods များ ဖေါ် ဆောင် နိုင်မည်။ ခလေး ငယ်များကို ရယ် အောင် လုပ်ခြင်း သည် လွယ် သော်လည်း လူကြိးများအား ရယ် အောင် လုပ်၍ မလွယ်။ ရယ်ခိုင်း လျှင် ဟန်ဆောင် ရယ် ခြင်းသာ ရနိုင်မည်. သဘာဝ အလျှောက် ရယ်ခြင်း က သာ အကောင်း ဆုံး Mood ဖြစ်သည်။
Flash လိုသလား မလို သလား ဆိုသည် နှင့်ပတ်သက်၍ အချို့ က သဘာဝ အလင်းရောင် နှင့်ပင် ရိုက်ကြ ပြီး အချို့ ကမူ Fill-in Flash ကို အစဉ်သုံးလေ့ ရှိကြသည်။ မိမိ အနေနှင့်မူ အခြေအနေပေါ် လိုက်၍ သုံးသင့် သည်ဟု ဆိုခြင်သည်။ နေရောင် လုံလောက်စွာ ရသည့် ညနေခင်းလို အချိန်မျိုးတွင် Flash မလိုသေည်လည်း အင်္ဂလန် ကဲ့သို့ အစဉ် အုံ့ ဆိုင်နေသည့် အရပ် တွင် မူ Flash မလွဲ မသွေ လိုပေမည်။
Posted by Soe Hlaing at 07:57